Mudaaharaad rabshado wata oo gilgilay degmada Burtinle gobolka Nugaal -DHEGAYSO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Mudaaharaad rabshado wata oo gilgilay degmada Burtinle gobolka Nugaal -DHEGAYSO
Mudaaharaad rabshado wata oo gilgilay degmada Burtinle gobolka Nugaal -DHEGAYSO
July 15, 2017 - By: HORSEED STAFF
File Photo, Sawir hore
Degmada Burtinle ee gobolka Nugaal waxaa maanta ka dhacay mudaaharaad ballaaraan oo markii danbe isu bedalay mid rabshado wata, waxaana ku dhaawacmey dhawr qof.
Mudaaharaadka ayaa daba socdey kadib markii $100 uu gaarey afar milyan oo shiling Soomaali ah kaas oo aan abid dhicin, maciishadii ayaa cirka isku shareertey, waxaana ka dhashey carro dadweynuhu kula dhacaan ganacsatada.
Taliye ku xigeenka Saldhigga Booliska Burtnle ayaa warbaahinta u sheegay in markii hore la sheegay in mudaaharaad nabadeed dhacayo oo looga cabanayo sicir bararka, laakiin markii danbe isu bedalay rabshado, waxaa la gubey shaagag waxaa dab la qabadsiiyey goobo ganacsi.
Taliyaha ayaa sheegay in laamigu go’an yahay hadda xaaladuna tahay mid cakiran. Waxaana uu sheegay in ay jirto dhibaato aysan waxba ka qaban karin, Burtinle Boolisku hal gaari ayuu lee yahay gaarigiina waa xumaadey, anaga ayaana dhaawac na soo gaarey waxaana nahay gacmo ku gabad ayuu yiri.
Shacabka ayaa ka cabanaya in lacagtii Soomaaliga laga diidey, Dollarka Maraykanku waa ku yaryahay dalka sarifkuna waxa uu gaarey heer aan waxba la iibsan karin.
Sariflayaasha lacagta qalaad ayaa sheegaya in lacag coosh ah ay ka timid dhanka Beledweyne iyo bartamaha Soomaaliya taas oo sababtey in ay dollarka gaarsiiso boqolkiiba afar milyan oo dollar.
Maamulka Puntland ayaa gudaha Bosaso ku daabaca lacagta Soomaaliga ee kunka ah, taas oo hab xadidadan u soo geli jirtey suuqyada, waxaana maamulku ku bixin jirey mushaharaadka ciidamada iyo shaqaalaha, tan iyo markii ay bilaamatey daabacadda lacagtaas waxaa si weyn kor ugu kacay sarrifka oo markii hore ahaa $1=22 ilamaa iyo 23 000Sh.So.
Xiligii Dowladdii Gen. Cadde Muuse ayaa sidaan oo kale Bosaso ku daabici jireen lacagta Soomaaliga, waxaa Dollarku gaarey markii u sareysey $100=3 000 000Sh.So, waxaana dhacay kacdoon dadweyne oo culimada masaajidu ay hoggaaminayaan taas oo lagu qanciyey in maamulku joojiyo lacgtaas, Madaxweyne Cabdiraxmaan faroole ayaa makiinadii daabaici jirrtey dalka ka saarey.